Alarobia 09 Jiona 2021 – FJKM
Alarobia 09 Jiona 2021
Rehefa niteny I Jesoa dia tonga nalazo ilay aviavy. Andriamanitra tokoa Jesoa ka manana hery sy fahefana hahatanteraka izay nolazainy. Tena natoky an’Andriamanitra rahateo izy, tsy mba hita ho nisalasala. Lojika raha toa ka tanteraka avokoa ny zavatra rehetra noteneniny. Tsy vao teto akory no nahitana izany, fa izay rehetra notenenin’i Jesoa ao amin’ny Filazantsara dia notanterahin’Andriamanitra rahateo , ary ara-dalàna raha tanteraka izay noteneniny.
Rehefa mangataka isika dia tsy mahazo misalasala. Ny fisalasalana mantsy dia mariky ny tsy fahatokiana an’Andriamanitra. Ary raha tsy matoky an’Andriamanitra, tsy hahazo valim-bavaka. Rehefa mivavaka dia zavatra takiana ny finoana, mahazo manantena valim-bavaka avy amin’ny Tompo isika rehefa matanjaka ny finoana. Ny finoana mantsy dia fahatokiana fa tena hamaly vavaka tokoa Andriamanitra. Aza hadinoina fa marina mandrakariva ny Tenin’i Jesoa hoe : » Lazaiko aminareo marina tokoa : Raha manam-pinoana hianareo ka tsy miahanahana… ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo » Mat 22.20,21
Inona no tsara : Mivavaka aloha vao mino, sa mino aloha vao mivavaka, sa mino sady mivavaka ?